ओली असार ५ गते चीन जाने पक्का, को को छन् टिममा ? - Dainik Nepal
ओली असार ५ गते चीन जाने पक्का, को को छन् टिममा ?
दैनिक नेपाल २०७५ जेठ ३० गते १६:४४
काठमाडौँ, ३० जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो असार ५ गते उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाने पक्का भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ ।